China Steel Metal Roofing Manufacturer and Supplier | Amara
Ji achọ Metal Ibé akwụkwọ
Industrial Metal ụlọ
Fkwanyere Ewepụghị Roofing
Na taa elu na-agba ulo oru afọ, omenala ígwè mpempe akwụkwọ ike izute ahịa 'chọrọ n'ihi na nke ogbenye heatproof, ogbenye soundproof na mfe corrosion.
Iji dozie nsogbu ndị a, SmartRoof, otu ndị na-elekwasị anya na mmepe nke ihe mkpuchi ụlọ karịa afọ 20, enweela ihe ịga nke ọma mepụtara ụdị ihe eji eme ihe ọhụụ iji mejuo ajụjụ ndị ahịa, karịsịa na mpaghara ụlọ ọrụ na ugbo.
UV eguzogide ọgwụ Steel Metal Roofing:
Na taa elu na-agba ulo oru afọ, omenala ígwè mpempe akwụkwọ ike izute ahịa chọrọ n'ihi na nke ya ogbenye heatproof, ogbenye soundproof na mfe corrosion.
Tụlee na mpempe akwụkwọ nchara ọdịnala, SmartRoof Steel, okpomọkụ na-ebelata ruo ogo 45 na ụda na-agbada ruo 40 dbs. Na oke ihu igwe, Smart Roof Steel nwere ike iburu ogo 150 kachasi elu ma mwepu 40 ogo kacha nta. Ihe dị mkpa bụ ịchekwa ego, n'ihi na SmartRoof Steel jikọtara ọrụ ọkụ ọkụ na arụmọrụ na-arụ ọrụ ọnụ ma ọ dịghị mkpa ịdabere na ihe ndị ọzọ. Banyere oge ndụ gị, kwe nkwa ruo afọ 20, okpukpu abụọ karịa nke ọdịnala.
SmartRoof Steel, ihe eji eme ka ụlọ rụọ ọrụ ọhụụ, ga - eduzi mgbanwe na gburugburu ụwa. SmartRoof Steel, ngwaahịa dị mma ị kwesịrị ịnwe.
.Dị SMARTROOF STEEL
Ihe omuma galvanized ígwè mpempe akwụkwọ
Obosara 828-840mm (mgbe corrugated)
Raw ihe obosara 1m ka 1.2mm
Zinc mkpuchi Z30-275g / m2
Agba mkpuchi Top: 5-20µm azụ: 5-10µm ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Agba RAL koodu Mba ma ọ bụ ụdị agba ndị ahịa
Ọgwụgwọ ihu Chromed passivation, akọrọ, (un) mmanụ, praịm ọkwa
ọ bụla mpempe elu nwere ike na-ese logo dị ka ndị ahịa chọrọ
Ugbo Gachi, efu, pere mpe spangle
Ibu arọ 1.5-3 MT ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
A.Gịnị mere ịhọrọ anyị?
1. Mpi price na àgwà si anyị onwe anyị factory
2. Kwadoro site na ISO9001, CE, SGS kwa afọ
3. Best ọrụ n'ime 24 hour`s zaghachi
4. Mgbanwe ugwo na T / T, L / C na wdg
5. Ezigbo ikike mmepụta (50000tons / ọnwa)
6. Ngwa nnyefe na ọkọlọtọ ebupụ ngwugwu
B.What nwere ike ijere gị ozi?
1. Enwere ike ịnye ihe nlele na n'efu.
2. Anyị nwere ngwaahịa zuru oke, ma nwee ike ịnapụta n'ime obere oge. Andị ọtụtụ maka nhọrọ gị.
3. OEM na ODM iji na-anabata, Anydị ọ bụla nke logo ebi akwụkwọ ma ọ bụ imewe dị.
4. Ezi Mma + Ọnụahịa ụlọ ọrụ + Azịza ngwa ngwa + Ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, bụ ihe anyị na-anwa kacha mma ịnye gị.
5. Ngwaahịa anyị niile bụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma anyị nwere otu ndị ahịa mba ọzọ na-arụ ọrụ dị elu, ị nwere ike ikwenye na ọrụ anyị.
7. Anyị ga-agụ ọnụ ala mbupu na-eri ma na-eme ka akwụkwọ ọnụahịa gị ozugbo.
8. Lelee mma ọzọ, wee zipụrụ gị na 1-2 ụbọchị ọrụ mgbe ịkwụchara ụgwọ gị,
9. Email gị nsuso mba, ma nyere aka ịchụ ngwugwu ahụ ruo mgbe ọ rutere gị.
Nke gara aga: Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ
Osote: N'ogbe Metal Roofing
Yi Resopial ụlọ efere
Ebe obibi Houselọ Ulo
Ebe obibi Corrugated ụlọ
Ebe obibi Roolọ
Ogwe Nrụrụ Arụrụ
Wụnye Corrugated Metal Roofing
Zinc mpempe akwụkwọ Metal Roofing
Hlọ H, 30 / F, Foshan Development Building, No.13, East Hua Yuanrd, Foshan, Guangdong, China